Qaybaha wax lagu qodayo ee tayada sare leh walxaha shaandhada hawada AF490M soosaarayaasha iyo alaableyda | Hertz
Lambarka OEM TA6018B
Bedelida Fleetguard: AF490MSakura: A-6008 A-6117-SBaldwin: PA1911Donaldson: P106834
Daanyeer: MB-K830B MB-K846B
YOOXANAA DEERE: AR46004
Dhexroor Guud ahaan Dhererka: 330mm Dhammaadka 1 OD: 146mm Dhammaadka 2 OD: 116mm Dhammaadka 1 Aqoonsiga: 88mm
1. Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saare?
Soo saare warshad leh.
2. Miyaad aqbashaa adeegga OEM?
Haa, waxaan soosaari karnaa si waafaqsan shuruudahaaga.
3. Waa maxay qiimahaagu?
4. Ma haysaa tiro dalab ugu yar?
5. Ma bixin kartaa dukumintiyada ku habboon?
6. Waa maxay celceliska waqtiga hoggaaminta?
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa ilaa 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay waxtar yeeshaan marka
1) waxaan helnay deebaajigaagii, iyo
2) waxaan haysanaa ogolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan la shaqeynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaan la jaanqaadno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
7. Noocee ah qaababka lacag bixinta ee aad aqbasho?
8. Waa maxay dammaanadda alaabtu?
9. Ma dammaanad qaadeysaa inaad alaab ammaan ah oo ammaan ah keeneyso
10. Sidee ku saabsan khidmadaha maraakiibta?
Hore: Gawaarida Waajibaadka culus ee Sifeeyaha Hawada Dibadda AF418
Xiga: Qaybaha Mashiinka Warshadaha Qalabka miiraha hawada AF4739
Qaybaha Gawaarida Nadiifinta Mashiinka Hawada Filter AF437K